थाइराइड : लक्षण र समस्या कस्तो ? - JaljalaKhabar Online Portal from Nepal
थाइराइड : लक्षण र समस्या कस्तो ?
विश्व थाइराइड दिवस बुधबार विभिन्न जनचेतनामुलक कार्यक्रम गरी नेपालमा पनि मनाईँदैछ । विश्वभर थाइराइड ग्रन्थी सम्बन्धी रोगका बिरामी बढ्न थालेपछि यसबारे जनचेतना दिने उद्देश्यले सन् २००८ देखि हरेक वर्ष मे २५ मा दिवस मनाउन थालिएको हो
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको आयोजनामा विश्व थाइराइड दिवस मनाउने गरिन्छ । थाइराइड भनेको एउटा ग्रन्थी हो । यो घाँटीको अघिल्लो भागमा रुद्रघण्टीको तल रहेको हुन्छ । यो ग्रन्थीले थाइरोक्सिन (टी–३) र ट्राइआयोडो थाइरोनीन (टी–४) हर्मोन उत्पादन गर्ने डाक्टरहरु बताउछन् ।
उनीहरुका अनुसार थाइराइड ग्रन्थीको काममा गडबडी भए अनावश्यक हर्मोन बढी र आवश्यक हर्मोन कम मात्रामा उत्पादन हुन्छ । हर्मोन बढी उत्पादन हुनुलाई हाइपर थाइरोइडिज्म भनिन्छ भने कम हर्मोन उत्पादन गर्ने कामलाई हाइपो थाइरोडिज्म भनिन्छ ।
हाइपर थाइरोइडिज्म् २ वर्ष औषधि सेवन गरे निको हुनसक्छ । हाइपो थाइरोडिज्म भए धेरैजसो बिरामीले जीवनभरी नै औषधि खानुपर्छ । यो रोग पुरुषको तुलनामा महिलामा धेरै देखिएको डाक्टरको भनाई छ । बालबालिकामा वंशाणुगत कारणले लाग्ने हाइपो थाइरोडिज्मले उनीहरुको दिमागको बृद्धिविकास रोकिने र सुस्त मनस्थितिका हुने अध्ययनले देखाएको छ ।
गर्भावस्था वा त्यो भन्दा अघि थाइराइडको समस्या भए बच्चामा सर्ने जोखिम बढी हुन्छ । त्यसैले जन्मेको एक हप्ताभित्र बच्चाको थाइराइड परीक्षण गराउनु पर्छ । महिनावारी नियमित नहुने, मोटोपना, अल्छी हुने, मोटाउने, शरीर सुन्निने, दिक्क लाग्ने, अनावश्यक जाडो हुने, प्रजनन् क्षमतामा कमी हुने थाइराइडमा लक्ष्यण हुन् ।
यस्तै कपाल झर्नु, एकदमै दुब्लाउनु, मुटुको धड्कन बढ्नु, शरीरको तापक्रम बढ्नु, भोक बढी लाग्नु तर दुब्लाउनु, दिसा बढी लाग्नु, मन आत्तिनु र मानसिक तनाव बढी हुनु पनि यसको लक्ष्यण हो । युवामा थाइराइडको समस्या भए केही समयका लागि खुट्टा नचल्ने लक्षण देखिन सक्ने डाक्टर बताउछन् ।
मधुमेह भएका बिरामीले वर्षको एकपटक थाइराइडको पनि परीक्षण गर्नुपर्छ । कहिले काहिँ हाइपर थाइराइडिज्म्मा मधुमेह रोग पनि देखिन सक्छ । यसमा थाइराइड निको हुनासाथ मधुमेह पनि आफै निको भएर जान्छ । थाइराइड अटो इम्युन रोग भएकाले खाना बार्नु पर्दैन ।